Terms of Service – JOOPZY
Dhaqso! Koodhadhka kuuban: "cybermonday2020"
30-maalmood oo lagu qanco qanacsanaanta Lacag celinta Haddii aadan ku qancin badeecadaada waxaan soo saari doonaa lacag celin buuxda, su'aalo lama weydiin.
In ka badan si guul leh 28.775 amarradii la diray Waxaan sameynay macaamiil fara badan oo faraxsan sida amarada badan aan u dirnay. Waa inaad si fudud ugu biirtaa qoyskeena weyn.
Websaydaan waxaa maamula by Joopzy LLC. Goobta oo dhan, ereyada "annaga", "annaga" iyo "our" ayaa tilmaamaya Joopzy.com. Joopzy.com Waxay bixisaa websaydhkan, oo ay ku jiraan dhammaan macluumaadka, aaladaha, iyo adeegyada laga heli karo degelkan adiga, isticmaaleha, oo shardi ka dhigay inaad aqbasho dhammaan shuruudaha, shuruudaha, siyaasadaha, iyo ogeysiisyada halkan lagu sheegay.
Dhammaan amarradeenna waxaa laga soo diray Shiinaha. Waxaan sameynay macaamiil fara badan oo faraxsan sida amarada badan aan u dirnay. Waa inaad si fudud ugu biirtaa qoyskeena weyn.
Fiiro gaar ah: Maaddaama dhammaan amarradeenna laga soo dhoofiyay Shiinaha annaguna mas'uul kama lihin nooc kasta oo cudur ah.
Waxaad ku raacsan tahay inaadan soo saarin, nuqulin, nuqul, iibin, iibin ama laga faa'iideysan qayb ka mid ah Adeegga, isticmaalka Adeegga, ama adeegga Adeegga ama xiriir kasta oo ku yaal bogga internetka taas oo adeegga la bixiyo, iyada oo aan si cad u qorin fasax .
Cinwaanada loo adeegsaday heshiiskan waxaa lagu darayaa ku habboon oo keliya mana xadido doonto ama haddii kale saameyn kuma yeelan doonto shuruudahan.
QAYBTA 3 - SAXDA, BUUXINTA, IYO WAQTIGA MACLUUMAADKA
Alaabooyinka qaarkood ama adeegyada qaarkood ayaa laga heli karaa khaas ahaan khadka tooska ah websaydhka. Alaabooyinkan ama adeegyadan waxaa laga yaabaa inay leeyihiin tiro xaddidan oo waxaa laga yaabaa inay ku soo noqdaan ama ku beddelaan keliya sida ay tahay Return Policy.
Waxaan xaq u leenahay laakiin aan waajib ku ahayn, in la xaddido iibinta alaabtayada ama Adeegyadeena qof kasta, gobolka juqraafi ama xukunka. Waxaan u isticmaali karnaa xuquuqdan arrin kiis-kiis. Waxaannu xaq u leenahay inaan xadidno tirada alaabooyinka ama adeegyada aan bixino. Dhamaan sharaxaadda badeecada ama qiimaha badeecadda waxay ku xiran tahay wakhti kasta iyadoon ogeysiis, adigoo kali ah. Waxaannu xaq u leenahay inaan joojino alaab kasta waqti kasta. Dalabaad kasta ee alaab ama adeeg kasta oo laga sameeyay boggani waa ka mamnuuc meesha laga mamnuucay.
Waxaan xaq u leenahay inaan diido amar kasta oo aad nagala soo xiriirto. Waxaan ku xadidi karnaa, u xadidno ama baabi'in karnaa tirada qof ee lagu iibsaday qofkiiba, guri kasta ama amarkiiba. Xanibaadahan waxaa ka mid noqon kara amarada lagu meeleeyay ama hoos imanaya isla xisaabta macaamiil, isla kaarka deynta, iyo / ama amarada isticmaala isla biilasha iyo / ama cinwaanka dhoofinta. Haddii ay dhacdo in aan wax ka beddelno ama aan baabi'inno amar, waxaan isku dayi karnaa in aan kugu wargalinno annaga oo la xiriirna cinwaanka e-maylka iyo / ama cinwaanka biil / lambarka taleefanka ee la bixiyey markii amarku bixiyey. Waxaan ilaalinaa xuquuqda aan xadidno ama ka mamnuucno amarrada,, go'aankeenna keliya, u muuqda inay dejinayaan kuwa ka ganacsada, kuwa wax iibsada ama kuwa wax iibiya.
Waxaad ogolaatay inaad bixiso akhbaar gaaban, dhammeystiran oo sax ah iyo macluumaadka koontada ee dhammaan iibsiyada laga sameeyay dukaankeenna. Waxaad ogolaatay inaad si dhaqso ah u cusbooneysiiso koontadaada iyo macluumaadka kale, oo ay ku jiraan cinwaankaaga emailka iyo lambarrada kaararka deynta iyo taariikhda dhicitaanka si aan u dhamaystirno macaamilkaaga oo aan kula soo xidhiidhi karno sida loogu baahan yahay.
Waxyaabaha qaarkood, badeecada, iyo adeegyada laga heli karo Adeeggeenna waxaa ku jiri kara agab ka socda dhinac saddexaad.
QAYBTA 9 - FAALLOOYINKA ISTICMAALKA, DIIWAAN-GELINTA, IYO SOO-gudbinta KALE
Soo gudbintaada macluumaadka shaqsiyadeed ee dukaanka waxaa xukumaya annaga Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah.
QAYBTA 11 - QALADKA, WAXBARASHADA, IYO QIIMAYNTA
Wax ka qabashada waajib kuma ah inaan cusbooneysiinno, wax ka bedelno ama aan cadeyno macluumaadka Adeegga ama bogga kale ee la xiriira, oo ay ku jiraan xadid la'aan, macluumaadka qiimaha, marka laga reebo sida uu sharcigu farayo. Ma jiro taariikh cusub oo la cusbooneysiiyay ama cusbooneysiin lagu dabaqay Adeegga ama shabakad kasta oo la xidhiidha si loo muujiyo in dhammaan macluumaadka Adeegga ama bog kasta oo la xiriira la sameeyay ama la cusbooneysiiyay.
Si kastaba ha noqotee joopzy.com, agaasimayaashayada, saraakiisha, shaqaalaha, shuraakada, wakiilka, qandaraasleyaasha, interns, alaab-qeybiyeyaasha, bixiyeyaasha adeegga ama shati-bixiyeyaasha ayaa mas'uul ka ah dhaawac kasta, khasaaro, sheegasho, ama wixii toos ah, aan toos ahayn, shil, ciqaab, gaar ah , ama waxyeelada nooc kasta ah, ooy kujirto, iyadoon xadidid faa'iido laga lumin, dakhli lumay, keydin lumis, luminta xogaha, qarashka beddelka, ama wixii waxyeelo la mid ah, hadey salka ku haysay heshiis, jirdil (ay kujirto dayacaad), qaanad adag ama haddii kale, kacsanaan. laga bilaabo adeegsigaaga adeeg kasta ama alaabo kasta oo lagu soo iibsado adoo adeegsanaya adeegga, ama sheegasho kasta oo laxiriira dariiqa adeegsigaaga ama badeecad kasta, oo ay kujirto, laakiin aan ku xaddidnayn, wixii khaladaad ah ama iska-dhaaf ah wixii agab ah, ama wixii khasaare ah ama waxyeelo ah oo nooc kasta ah oo ka dhasha adeegsiga adeegga ama wixii agab ah (ama shey ah) oo la dhejiyay, la gudbiyo, ama haddii kale lagu helo adeegga, xitaa haddii lagula taliyo suurtagalnimadooda. Sababtoo ah gobolada qaarkood ama xukumaduhu ma ogolaanayaan ka-reebitaan ama xaddidaadda mas'uuliyadda wixii ka dhalan kara ama waxyeelada shilalka ah, ee gobolladaas ama awoodahaas, qaanaddeena ayaa ku koobnaan doonta illaa inta ugu badan ee sharcigu oggol yahay.
Waad ogolaatay inaad sharax ka bixiso, difaacdo oo joojiso waxyeelada aan joogsi lahayn joopzy.com iyo waalidkeen, kaabayaasha, shuraakada, wada-hawlgalayaasha, saraakiisha, agaasimayaasha, wakiillada, qandaraasleyaasha, bixiyeyaasha adeegga, qandaraasleyaasha, alaab-qeybiyeyaasha, kuwa shaqada ka shaqeeya iyo shaqaalaha, aan dhib lahayn wixii sheegasho ama dalab ah, oo ay kujirto khidmadaha qareenka ee macquulka ah, oo ay sameeyeen dhinac kasta iyadoo ay ugu wacan tahay ama ka soo baxday jebintaaga shuruudahan Adeeg ama dukumiintiyada ay ku daraan tixraac ama jebintaada sharci kasta ama xuquuqda qolo saddexaad.
Shuruudahan Adeeggan iyo siyaasad kasta ama qawaaniin hawlgal ah oo aan ku dhejinay boggan ama quseeya Adeeggu wuxuu ka kooban yahay dhammaan heshiiskii iyo isfahamkii idinka dhexeeyey adiga iyo annaga oo xukumaya adeegsigaaga Adeegga, kaasoo kaabaya wixii heshiisyo hore ama casriyeyn ah, isgaarsiin iyo soo jeedinno , ha noqoto mid hadal ah ama mid qoran, annaga iyo annaga (oo ay ku jirto, laakiin aan ku xaddidnayn, nooc kasta oo ka mid ah shuruudaha Adeegga).
Shuruudahan Adeeggan iyo heshiis kasta oo gaar ah oo aannu ku siinno adeegyo waxaa xukumaya oo loo dhisi doonaa si waafaqsan shuruucda Mareykanka.
QAYBTA 19 - ISBEDDELKA SHARCIYADA ADEEGGA
QAYBTA 20 - MACLUUMAADKA XIDHIIDHKA
Su'aalaha ku saabsan Terms of Service waa in loo diraa noo at [emailka waa la ilaaliyay]
Furaha ayaa loo diri doonaa cinwaanka emailkaaga.